Chatroulette iPad Chatroulette ho an'ny hafa ny iPad sy iPhone
Chatroulette iPad Chatroulette ho an’ny hafa ny iPad sy iPhone
Chatroulette ho an’ny iPad dia afaka loharano hankafy iOS Chat maimaim-poana amin’ny aterineto. Manokana, ho an’ny iPad, Chatroulette dia natao mba hanome aina ny fampiasana sy ny fampiononana ny mpampiasa ny fifandraisana interface tsara. Eto, dia tsy havela tsy miraharaha. Rehetra tsy maintsy manindry ‘Start’ sy mankafy ny ara-pahasalamana ny fifandraisana amin’ny kisendrasendra ny olona araka ny anjara. Amin’izao fotoana izao Chatroulette ho an’ny iPad lasa zava-dehibe lehibe hafa mba mankaleo ny lahatsary amin’ny chat. Ny isan’ny olona mitady iPad amin’ny chat dia tsy mitsaha-mitombo avy amin’ny vahoaka izay tsy mitsaha-mampiasa ny aterineto. Ato anatin’ny roa taona ho avy, izany dia mialoha fa ny iPad sy ny mpampiasa iPhone dia nikapoka ny PC mpampiasa raha ny fampiasana aterineto, araka ny filazan’ny sasany large-scale fandalinana ny orinasa. Izany no antony, nahoana Chatroulette ho an’ny iPad efa andrasana ho lehibe hafa mba mankaleo ny lahatsary amin’ny chat. Isika koa dia faly mampahafantatra anao fa ny iPad Chatroulette dia azo maimaim-poana ary ho toy izany hatrany. Vaovao be dia be ny olona dia mankafy ny fiarahana amin’ny kisendrasendra mpitsidika isan’andro. Rehetra tsy maintsy manindry ‘start’ bokotra, ary ianao dia ho mifandray amin’ny olona sendra azy avy hatrany. Ankoatra izany, dia azonao atao ny miezaka ny PC dikan-Chatroulette. Ny iray lehibe zavatra ho filazana momba izany toerana, fa ianao dia afaka mahazo izany ary hiresaka tsy misy mandoa na inona na inona. Tsy maintsy mividy na inona na inona karazana tolotra avy amin’ny toerana, ary tsy maintsy mandoa ny mampiasa ny lahatsary amin’ny chat toerana. Tsy misy fombafomba fisoratana anarana dia tsy maintsy ao amin’ny toerana ity. Rehetra tsy maintsy ho ambony taona mba hanatevin-daharana ny site. Chatroulette ho an’ny iPad tsy mitaky ny finday fanamarinana rehefa tonga ny fisoratana anarana. Na izany aza, tany am-boalohany chatroulette dia mitaky ireo mpampiasa hiditra fehezan-dalàna fanamarinana nalefa teo amin’ny finday. Raha vao ny fehezan-dalàna no mifanaraka, dia manamarina izany, ary mamela ny mpampiasa mba hiditra ny toerana. Fa ny olana fa ny olona sasany dia mankahala io mba fombafomba ary izany dia ahitana ny fuss rehetra amin’ny fisoratana anarana. Misy indraindray ny olona rehefa tsy mahazo ny fehezan-dalàna, satria ny tambajotra olana. Ary ny sasany mari-pamantarana tsy miasa na. Fotsiny ianao mba mandehana any amin’ny pejy fandraisana ny namany sary.
Fa mialoha izany, ianao dia tsy maintsy mamela ny toerana hampiasa ny webcam. Avy eo izany dia mamela ny fidirana amin’ny chat varavarankely. Raha toa ka tsy te hampiasa ny toerana ny lahatsary amin’ny chat, dia mety mahazo fotsiny ny lahatsoratra amin’ny chat toerana.
Mety handà ny fidirana ny mikrô na webcam
Raha tsy tahaka ny olona mahazo mihetsika miaraka amin’ny webcam, fotsiny ianao dia tsindrio manaraka ary afaka manohy ny resaka amin’ny mpampiasa iray hafa. Atỳ, dia afaka mampitsahatra avy hatrany ny resaka ary mahazo mifandray amin’ny olona izay avy hatrany dia misy.
Fa ho azo antoka ny tsy pranksters
Raha nahita azy ireo, tatitra momba izany avy hatrany. Maimaim-poana ny efitra hifampiresahana ChatRoulette ho an’ny iPad Miaro ny iPad sy ny tena azo antoka chat amin’ny Chatroulette noho ny iPad
← Ny fiarahana amin'ny sampan-draharaha rosiana ny ankizivavy
Chatroulette USA hafa noho ny rehetra - Chatroulette sy ny hafa →